people Nepal » मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन मन्त्रालयमा कसको दाबी ? मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन मन्त्रालयमा कसको दाबी ? – people Nepal
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन मन्त्रालयमा कसको दाबी ?
Posted on July 13, 2017 by Purna Nanda Joshi
असार २९ , काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार (१ साउनमा) मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । शनिबारसम्म मन्त्रीको टुंगो लगाउने र आइतबार विस्तार गर्ने सहमति सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छ ।
‘माओवादी अध्यक्ष शुक्रबार नेपाल फर्केपछि शनिबार दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याएर आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने । पत्नी सीताको उपचारका लागि प्रचण्ड बुधबार थाइल्यान्ड गएका छन् । उनी फर्केपछि माओवादीले मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउनेछ ।